Walaloo Seeneet Gizaachoo Miilli Kaayyoo By Raya Studio 2018 – Kichuu
HomeNewsAfricaWalaloo Seeneet Gizaachoo Miilli Kaayyoo By Raya Studio 2018
Walaloo Seeneet Gizaachoo Miilli Kaayyoo By Raya Studio 2018
Walaloo Seeneet Gizaachoo ** Miilli Kaayyoo ** By Raya Studio 2018
Geerarsa Haacaaluu Hundeessaa Eebba Kitaaba Lataa Qana’ii Irraa By Raya Studio 2018
The generation of light…the generation conviction…you are and always and forever will be the guardians of our country and people!
Dhugaan niqal’atti malee hincittu,Eebba kitaabaa Qeerroo Lataa qanaii irratti hayyoonni gurguddoon,beektonni,quuqamtootni sabaa, artiistotaafi,keessummaan kabajaa hedduun argamaniiru,tamsaasa Tv OMN dabarsee jira, badhaasni hooggantoota olaanoo obbo Lammaa,MM obbo Abiyyiifi Obbo jawaar Muhammadiifis karaa bakka bu’aa isaatiin laatameefii jira.bayyee namatti tola,osoo bilisummaa guutuu argannee hunduu fagoo miti.
ይች ባለጌ አማራን ኦሮም ተሳዱበሽ ሁሉም ይስማዉ ሽር ሽር
“Dhaqi Hiriyyaa kee dhaani jennaan Gowwaan galee Haadhamanaasaa dhaane” jedhama
Dr Abiyi Wayaanota warra isaa ajjeesuuf jedhe sodaatee loltoota isaatiin ummata oromoo ficcisiisaa jira.
Waraanni nama nyaataa Xoophiyaa kan Dr Abiyiin ajajamu ummata oromoo Wallaggaa nagaan jiraatu irratti jimlaan dhokaasa irratti banuun ummata nagaa jimlaan ajjeesaa jiru.Abiyi, Qawween faashiniinsaa darbee jira utuu jedhee sobee lallabuu faashiniin saba oromoo ajjeesuun garuu darbuu dide.
Abiyi,Wayaanee warra gooftoliisaa warra isa ajjeesuuf jecha sababasaa irraan kan ka’e ummata fixeen sodaatee ummata oromoo erga waggaaa dhibbaa fi keessumattuu ammoo erga waggaa 28 guutuu ajjeefamaa jiruun ammas itti fufiinsaaan ilmaanuma Oromootiin ajjeefamuun fi duguuginsi sanyii irra gahuun baayyee nama gaddisiisa. Ammaan booda kan ajjeesisuus kan ajjeesuus, kan du’uus kan ajjeesuus, kan buqqisiisus kan buqqifamus, kan boowus kan boossisuus oromoo qofa gidduutti ta’ee jira. Kun ammoo salphina guddaadha saba oromootiif. Halagaan amma tooftaadhaan qarqara dhaabattee karaa ergamtootashee Ilmaanuma Oromootiin saba Oromoo waraansisaa jirti. Kanaaaf Oromoon yoo gamnoomeef hatattamaan furmaata barbaaduu qaba. Ilmi oromoo tokko halagaaf baabsee lammiisaa miidhuu hin qabu.
ooftaan diinota saba Oromoo “Oromon Oromoo ajjeesisuu fi walitti duulchisuu dha.”
Haala tooftaa bifa kanaan erga guyyaa gaafa Dr Abiyiin gara muummicha ministeeraatti muudamee asitti bifi fi tooftaa ittiin diinoti saba oromoo, ummata oromoo ajjeesaa jiran jijjiramee jira. Dur kan ajaju wayaanee kan raawwatu ykn ajjeesu, hidhu OPDO ture. Amma garuu muummicha ministeeraa waliin ministeerota Oromoo kudha tokkoo olitu aangoo bakka furtuurra jiru. Akka kanaan haalli jijjiiramuun, kan ajajus ajajamus, kan ajjeesus ajjeefamus, kan duulchisuus kan irratti duulamus Oromoo qofa ta’ee jira.
Yeroo ammaa kanatti abbaa hubatee ilaaleef: taphataan, taphachiisan, kubbaan fi dirreenis hundi Oromoo fi Oromiyaa irratti taatee jirti. Warri halagaan amma tufoozoo cimaa naannessanii Harka rukutaafii jiru. Bravo! Jabaadhaa walfixaa jechaa jiru.
Oromo TV: Haala Yaroo Impaayera Toophiyaa laalchisee – Dr. Alamaayyoo Birruu fi obbo Tashaalaa Abarraa waliin taasifne
በመስቀል አደባባይ በደረሰ የቦምብ ጥቃት ፍንጭ የሚሰጥ ቪዲዮ ከNaoo Tv ከተቀረጸ ላይ ተገኘ